Noma yimuphi inkampani esikhiqiza izimpahla noma amasevisi, kudinga ukuthuthukiswa komkhiqizo kumthengi. Ukuze ufinyelele kulesi ukusebenzisa izindlela zocwaningo ukumaketha noma Umnyango wezokumaketha noma uqashwe yezinhlaka ezikhethiwe. Lezi izifundo zenzelwe ukufunda futhi uhlaziye zabathengi okuthandwa, imiphumela tematheksthi ukukhangisa namavidiyo ku engicabanga ukuthi angaba yikhasimende, ahlukahlukene izikhangiso nenye imidiya lokuqwashisa umphakathi mayelana nomkhiqizo noma inkampani uwonke.
Ingqikithi ukumaketha cwaningo yocwaningo lwemakethe ukuze ahlinzeke imiphumela olunembile futhi evumelekile yenkampani yokuhlola, aqhutshelwe injongo. Ilindele ukukhululwa umkhiqizo omusha kungaba ukuhlonza ingxenye umthengi, ukutadisha ezingaba umthengi yokusabela kuya umkhiqizo, isifundo imikhiqizo ukuncintisana, ukuhlonza izinzuzo umkhiqizo omusha phezu ekhona emakethe, ukuhlolwa umkhiqizo futhi ekunqumeni okuthandwa iphakethe.
Izindlela zocwaningo ukumaketha, kunezinhlobo ezahlukene: ukuhlaziya isazi, inhlolo-vo, focus amaqembu, indlela yokulinga ukuhlaziywa okuqukethwe. Kukhona izindlela iKhabhinethi, izindlela ukugada kanye ngokujulile izingxoxo. Ngokuvamile, lapho ucwaningo emakethe isetshenziswa izindlela eziningana eziyinkimbinkimbi ukuthi inqunywa simiselwe imigomo abakhangisi kanye nezinhloso.
Marketing, ngokwengxenye enkulu, kuyinto ukuma izimpahla noma amasevisi esekelwe nombono. izindlela Ngasekuqaleni zocwaningo ukumaketha yayiba ikakhulukazi ukuthola iziteshi zokusabalalisa obusha nezindlela ukwanda yokuthengisa. Manje abakhangisi baqonde ukuthi ukubaluleka kakhulu eziyisisekelo emsebenzini wabo isifundo esiphathelene izidingo nezinto ezithandwa umthengi. F Kotler uchaza it eqinisweni kakhulu isibonelo isaga esidala Spanish, othi ukuze umuntu abe bullfighter okuhle, kumelwe siqale sifunde inkunzi.
izindlela eziningi yemakethe manje asetshenziswa ukunquma izidingo abathengi, ukuhlola emakethe futhi imakethe ekulenzeni libe namandla. Ezinye zazo yilezi:
Okubukwa ezitolo. Lapha sifunda ukuziphatha abathengi, ukunyakaza kwabo ngokusebenzisa esitolo, ukulandela lokho ayimkhangi yabo kwasekuqaleni, yini ukusatshalaliswa ukunakwa ubulili, ubudala kanye namaqembu omphakathi, umthelela yesondlo nokunye.
Surveillance ekhaya - abacwaningi ithunyelwa amakhasimende amakhaya ukuze uthole ukuthi bona nemikhaya yabo noma iyiphi imibono neziphakamiso basonta kulo mkhiqizo futhi kanjani ukuyisebenzisa ekhaya, ukuze sithuthukise lo mkhiqizo.
Ukuqaphelwa kwezinye izindawo.
Eenqhemeni okunqotjhwe kizo. ethandwa kakhulu ngenxa yokuthi ukhetha iqembu elithile labantu, futhi nabo isikhashana, aphethwe izingxoxo, ukuhlola, ukuhlolwa. Lonke lo bhalisa kuvidiyo noma umsindo abezindaba ukuthi yabe isihlaziywa futhi kufinyelelwe iziphetho kanye iziphakamiso izenzakalo zesikhathi esizayo.
Ukuthengisa Imininingwane uhlelo ukuhlaziywa yakhelwe ukuletha yonke idatha eyatholakala kusukela iziteshi ezahlukene kanye iziphetho ezifanele. Uhlaziyo kumele iqale ekuqaleni at the stage of izinjongo isinqumo, ngaphandle kwalokho kuzoba khona ukuqonda ngokucacile ukuthi kufanele etholwe umphumela wokugcina futhi kuzoholela iziphetho rasplyvchivosti futhi eyahumusha.
Ekuqhubeni ukuhlaziywa ulwazi oluqoqiwe akufanele kubhekwe njengento engeyona umbono womuntu siqu, umuzwa kanye umcwaningi izintandokazi. Ingabe kuphela amaqiniso ahilelekile lovela abaphendulayo, bangakwazi kuyaphikisana, zihlanganisa ubandlululo nokunye, kodwa kuyokusiza abakhiqizi baqonde indlela ukuthatha isinqumo esifanele kuye. Ngoba ukwenza kanjalo, umbono eside, futhi kwenziwe lezi zifundo.
"Into 907": ngomzamo PT-76 sesimanje
Chemical wendiza izinwele: izinwele ukunakekelwa emva inqubo